I-arhente yezokhenketho i-Premnitz Rathenow ☀️ Brandenburg ✅ ukusukela ngo-1998
I-Camper - uphando lwe-motorhome kwi-intanethi
Indawo yokuphumla eJamani - imanyano yaseburhulumenteni
I-AIDA Imizuzu yokugqibela
Bhukisha indiza ecwangcisiweyo
Bhukisha ibaleka ngenqwelomoya
Ibhola ekhatywayo ye-UEFA EURO 2020 2021
IOlimpia Tokyo 2020 2021
IiOlimpiki zezemidlalo 2020-2021
Ukuhamba ngenqanawa iRhine Main Moselle
Imephu yamatyala e-coronavirus eJamani
Imephu ze-coronavirus iimeko zehlabathi
KwiB uthe.New Coricker entsha
I-Morgenpost.de Intsha entsha Corona
I-inshurensi yokuhamba yokuhamba kwi-intanethi
Uluhlu lokujonga uhambo
Ukupaka kwisikhululo seenqwelomoya
Bhukisha imoto eqeshisayo
Wamkelekile ku-Premnitz kunye noRathenow!
Inombolo yomnxeba yenkonzo +49 3386/210 110
Ngenxa ye Intlekele yaseCorona sikumisele umnxeba wenombolo ekhethekileyo apho siphendula imibuzo malunga nokuphunyezwa kunye nokucinywa kohambo lwakho.
Sinike umnxeba okanye usibhalele nge-whatsapp.
iindaba zohambo zamva nje
Ukubhalwa kwakhona kwasimahla kunye nokucinywa 3. Disemba 2020
IDubai yakha eyona hotele inde ehlabathini 16. Novemba 2020
Iziqithi zeCanary -Uvavanyo olubi lwe-corona lunyanzelekile ekungeneni 2. Novemba 2020
IOfisi yamanye amazwe yeFederal iphakamisa isilumkiso sokuhamba kwiiCanary Islands 26. October 2020
Iilwandle ezintle kakhulu kwihlabathi 2020 28. Septemba 2020
Amazwe angenaso isilumkiso sokuhamba 18. Septemba 2020
Isilumkiso sokuhamba kwamanye amazwe angama-38 kufuneka siyekwe 17. Septemba 2020
Le yeyona ndlela idumileyo yeebhayisekile eJamani. 7. Septemba 2020
Ukuphumla kwisanti yegolide yaseBulgaria kunokwenzeka kwakhona 25. Agasti 2020
Ikhefu laseDenmark-Ukuya eDenmark kwakhona ngaphandle kokuhlala ubuncinci 19. Agasti 2020
Iarhente yakho yokuhamba ePremnitz-Rathenow nayo yonke iBrandenburg
Sele kungo-1998 I-arhente yezokhenketho i-Premnitz kwaye Irathenow arhente yokuhamba. Njengearhente yakho yokuhamba ikufuphi, siya kukucebisa ngazo zonke iimfuno zakho zohambo kwaye sinikezele ngenkonzo engenakuthelekiswa nanto, ubuchule kwiingcebiso, ulwazi olubanzi ngemimandla eyahlukeneyo yeeholide kunye nothando lwethu olukhulu lokuhamba! Abathengi bethu abaphumi kuphela eRathenow nasePremnitz kodwa nakwi EBrandenburg kunye neHavelland yonke.
Singavuya ukukucebisa ngefowuni, nge-imeyile okanye, ngokukhethekileyo, ngokobuqu kwii-ofisi zethu ezimbini eRathenow kwiziko lesiXeko nase-Premnitz eBergstrasse 46 (State of Brandenburg).
Njengenkonzo ekhethekileyo, unokucwangcisa ixesha labathengi elimiselweyo! Ke ungahlala kwaye uphumle kwaye ufumane ingcebiso ngaphandle kwengcinezelo yexesha. Sithumele i-imeyile kunye nexesha lakho olithandayo imeyile@reisecafe-premnitz.de okanye usitsalele umnxeba kule nombolo 03386 210110.
Uya kufumana amacandelo amaninzi ahlukeneyo ekuhambeni kwiwebhusayithi yethu. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, siya kukuvuyela ukukunceda, Ungathandabuzi ukunxibelelana nathi
ngezantsi Ukhenketho lwepakeji Ungafumana iinjini zokubhuka ezahlukeneyo onokufumana ezahlukeneyo Angebote inokubonisa indawo, umzekelo. Ngaphantsi yonke yeyabathile Unikelo lwangoku lokuhamba luyaboniswa. Udidi ngomzuzu wokugqibela ikunika uluhlu lweendawo zokuhamba ezikhoyo ngoku. Ukuba usebenzisa iifilitha ezahlukeneyo, unokuthatha uhambo olupheleleyo okanye enye kwi-intanethi Bhukisha ihotele. Phantsi kwenqaku lokugqibela Iholide eJamani uyakufumana inkcaza emfutshane yamazwe ayi-16 aseburhulumenteni ngokudibana nezinye izinto kunye neendawo zeholide kwilizwe ngalinye.
Kutheni ungenzi enye babheke! Khetha phakathi kokuhlukileyo UAida uyabonelela okanye ufumane lamva UAida ngomzuzu wokugqibela Jonga iinqanawa zokuhamba. I UAida Ukuhamba ngenqanawa kusebenza ezahlukeneyo Iindlela kwihlabathi liphela. Ne Amaxabiso eAida Vario hlala kuwe Uhambo lokuhambisa akukho nto inqwenelekayo.
Ungumbhali weflaya ohamba rhoqo kwaye ukhetha ukukhangela indawo oya kuyo ngokukodwa. Sisi incwadi Zabo Ukubaleka ngenqwelomoya okanye Kwasungulwa flight yenzela Yean. Ungasebenzisa ngokulula i ukukhangela online yenze eyakho ngaphandle kwexesha elide lokulinda flight banokukhuphisana.
Enye into ekhethekileyo kwiarhente yokuhamba i-Premnitz kunye ne-arhente yokuhamba eRathenow (Land Brandenburg) kukuhamba kwezemidlalo. Ukuba unayo hamba kwi Imidlalo yeOlimpiki eJapan Tokyo 2021 Ukucwangcisa kubandakanya amatikiti kukhuphiswano lomntu ngamnye, sinokunxibelelana nawe. Ukwenzela i I-EUFA yeBhola yeBhola ekhatywayo yaseYurophu ngo-2021 Singakunika iphakheji edibeneyo kunye nokubaleka, ihotele kunye nokubonelela ngamatikiti emidlalo nganye.
I-Premnitz Rathenow Brandenburg Amakhonkco
Umbutho Wezokhenketho waseJamani
Amagama abalulekileyo avela kwicandelo lezokhenketho
Does Ithetha ukuthini yonke into?
Konke okubandakanyiweyo akubandakanyi izidlo kuphela kodwa kunye nazo zonke iziselo ezinxilisayo zalapha ekhaya kunye nezingasikhoyo.
✅ Uyintoni umzuzu wokugqibela?
Bhukisha umzuzu wokugqibela kwiinyanga ezintathu ukuya kwiiveki ezimbini ukusuka ekuqaleni kohambo lwakho. Ngeli xesha kunokubakho ukubhukisha indawo esezantsi okanye iindawo ezincitshisiweyo.
Yintoni ukhenketho lwepakeji?
Ukuba inqwelomoya kunye nehotele sele zibandakanyiwe kwixabiso lokhenketho kwaye ukhenketho lucwangciswe ngumqhubi wokhenketho, ubizwa ngokuba yiphakeji kukhenketho. Iinkonzo ezizezinye zohambo lwepakethi zinokudlulisela kwihotele okanye kukutya konke okubandakanyayo.
Agency Iarhente yokuhamba iPremnitz - Rathenow amaxesha okuvula?
NgoMvulo-ngolwesiHlanu ukusukela nge-9.00 ukuya kwe-18.00 ngorhatya lwangoMgqibelo ukusukela nge-9.00 ukuya kweye-12.00.
I-arhente yezokhenketho i-Premnitz
Irathenow arhente yokuhamba
IZiko lesiXeko, i-14712 Rathenow
I-cafe yokuhamba nge-Facebook
I-cafe yokuhamba nge-Twitter
I-Instagram cafe yokuhamba
Iqhayiya inikwe amandla yiWindowsPress | Umxholo: Sydney nguThemes.